Akụkọ - Gosipụta friji na friza
Ogo akụrụngwa nju oyi gụnyere friji ngosi na friza eji na nnukwu ụlọ ahịa nwere njikọ chiri anya na nghọta anụ ahụ onye ahịa. Ndị ahịa anyị si n'akụkụ ụwa niile na-akpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị site na ikpo okwu ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, site na nkwurịta okwu ugboro ugboro na ngwaọrụ nkata, ma mesịa kwado ụdị ihe ngosi nke friji na friza, iji mee ka ndị ahịa kpochapụ àgwà ngwaahịa na ọdịdị maka Gu. nzacha, ụlọ ọrụ anyị na-enye nyocha na saịtị na ọrụ nyocha n'ịntanetị. A na-ekwenye oge nleba anya tupu mmepụta nke ngwaahịa a, onye raara onwe ya nye ga-ebuli ma tufuo kọmishọna nyocha n'egbughị oge nke ndị ọzọ. Nyocha a nwere ezigbo ihe ịga nke ọma, ndị ahịa na-enwekwa ekele maka ngwaahịa anyị, ọ bụghị naanị àgwà ngwaahịa, kamakwa nkwenye nke ndị ahịa nke usoro mmepụta anyị, teknụzụ, njikwa mma na njikọ ndị ọzọ. Mgbe ị wụnye ngwaahịa ahụ, onye ahịa na-ekerịta foto nke ngwaahịa ahụ ma kwenye ịkekọrịta ya na Ịntanetị.
Ebumnuche anyị bụ ịnye ndị ahịa anyị ọrụ kachasị mma na ngwaahịa kachasị mma, iji jeere ọtụtụ mmadụ ozi sitere n'akụkụ ụwa niile, anyị kwenyere na ọ bụrụhaala na onye ahịa anyị na-eme nke ọma, anyị nwekwara ike ịga nke ọma.
Daalụ maka ntụkwasị obi gị, anyị ga-aga n'ihu na-enye ndị ahịa anyị ngwaahịa ndị ka mma.
Mụ na anyị, azụmahịa gị nọ na nchekwa, ego gị nọ na nchekwa.
Ogo bụ mkpụrụ obi nke ụlọ ọrụ, àgwà ngwaahịa na-ekpebi ma ụlọ ọrụ nwere ahịa, na-ekpebi ọkwa uru akụ na ụba nke ụlọ ọrụ, na-ekpebi ma ụlọ ọrụ nwere ike ịdị ndụ ma tolite na asọmpi ahịa dị egwu. "Ịlanahụ site n'ịdị mma, mmepe site na arụmọrụ" aghọwo ihe mgbaru ọsọ atụmatụ nke mmepe nke ọtụtụ ụlọ ọrụ; njikwa mma bụ mkpụrụ obi nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụrụhaala na ụlọ ọrụ ahụ dị, ọ bụ ebumnuche ebighi ebi nke ụlọ ọrụ ahụ na-achụ.